पब्जी गेम खेल्न हजुरबुवाको पेन्सन चैट, कसैको ज्यानै लियो पब्जीले ! | Nepal Ghatana
पब्जी गेम खेल्न हजुरबुवाको पेन्सन चैट, कसैको ज्यानै लियो पब्जीले !
प्रकाशित : २४ असार २०७७, बुधबार ०८:४७
भारतको पन्जाबमा एक किशोरले पब्जी (प्लेयर अन्नोन ब्याटलग्राउण्ड) गेम खेल्न हजुरबुबाको पेन्सन सकाएको सुन्दा यसको लतको बारेमा सहजै अनुमान लगाउन सुकिन्छ। ति किशोरले पब्जीको लतमै हजुरबुबाको २ लाख सकाएका हुन्। मोहाली जिल्लाका १५ वर्षीय ती किशोरले हजुरबुवाको पेन्सनको पैंसा पब्जीमा उडाएका हुन्। पब्जी गेममा भारतका मात्रै नभएर धेरै मूलुकहरुका युवायुवतीहरुको लत बढ्दो छ।
यसै वर्षको जनवरीबाट मात्रै खेल्न सुरु गरेका किशोरलाई बैंकको खाताबाट गोप्यरुपमा पैंसा खर्च गर्न स्कुलको सिनियरले सिकाएका थिए। पब्जीमा गेम खेल्नेबेला चाहिने विभिन्न सामग्री किन्नका लागि एपभित्रैबाट किन्न सक्ने फिचर रहेको छ । यद्यपी ती सामग्री नकिनेरै पनि गेम खेल्न सकिन्छ।
ती किशोरले दुई महिनामा पब्जी एपभित्रबाटै ५५ हजारको समाग्रीहरु किनेका रहेछन् । गेममा पैंसा तिर्नका लागि किशोरले पेटिएम (भारतको अनलाई पेमेन्ट सेवा) मा अकाउन्ट बनाएका थिए । त्यसका लागि उनले हजुरबुवाको सबै प्रमाणपत्रहरु प्रयोग गरेका थिए ।
परिवारले पछि बैंकबाट पैंसा निकाल्न पैसा कम पाएपछि सोधखोज गर्दा सबै कुरा बाहिरिएको हो । किशोरलाई यस विषयमा थप सोध्दै जादा उनले २ लाखभन्दा बढी पैंसा खर्च गरेको बताएका हुन् । उनको परिवारले अहिले यसरी उक्साएर ठगी गर्न सिकाउने स्कुलका सिनियरविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी गरेका छन् ।
केहि दिनअघि पन्जाबकै एक युवकले उपचारका लागि भनेर बैंकमा जम्मा गरिराखेको १६ लाख रुपैंया पब्जीमा खर्च गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो ।
ज्यानै लिने पब्जी !
केही समयअघि भारत सिवान जिल्ला हुसैनगञ्ज क्षेत्रका हम्मर गाउँ निवासी लाल मोहम्मद मंसुरीको २० वर्षीय छोरा अमजद अलीले आफ्नै घरमा झुण्डिएर आत्माहत्या गरे। उनलाई गाउँलेहरूले विश्वास गरे भने अमजद अली पाब्जी खेल खेल्ने क्रममा पराजयका कारण धेरै डिप्रेसनमा थिए र धेरै ठाउँहरूमा भन्थे कि म हारको बारेमा धेरै डिप्रेसनमा छु।
यसअघि कुर्लाका १८ वर्षीय नदिम कुरैसीले आत्महत्या गरे । आत्महत्याको कारण थियो पब्जी गेम । नदिमले अभिभावकलाई ठूलो स्क्रिनको मोबाइल किनिदिन आग्रह गरेका थिए । तर अभिभावकले माग पूरा सकेनन् ।
यस्तै भारत गुजरातमा २५ वर्षका युवकले आमाबुबालाई कुटपिट गरेका थिए । गेम खेलिरहेको अवस्थामा आमाबुबाले मोबाइल खोस्दा रिसाएका ती युवक अभिभावकमाथि जाइलागेका थिए ।
नेपालकै फुर्बा ग्याल्जेन शेर्पाका ६ वर्षका छोरा पब्जी खेल्दाखेल्दै बेहोस भए । बिहान खाटमा बस्दै पब्जी खेलिरहेका छोरालाई ४५ मिनेटपछि खाना खान बोलाउन जाँदा अचेत भेटिए । उनलाई तत्कालै अस्पताल लगियो । आधा घन्टापछि बालकको होस खुल्यो । होस खुलेपछि थाहा भयो उनी पब्जी प्लेनमा निकै माथि उडिरहेका थिए रे । प्लेनबाट हामफाल्दा ह्यान्डल गर्ने नसकेका ती बालकलाई मस्तिष्कमा असर परेको थियो ।
पब्जीको लतका यी केही उदाहरण हुन् । केही पब्जी खेल्नका लागि राम्रो र महँगो मोबाइल नपाएकोमा केहीले आत्महत्या गरेका छन् । यस्तै जागिर नभएर पब्जीमा फसेका देखि जागिर छाडेर पब्जी खेलमा व्यस्त भएका र परीक्षा दिन जान भुलेका घटना धेरे छन् ।
चीनीयाँ टेक्नोलोजी कम्पनी टेन्सेन्ट गेमले पब्जी बनाएको हो । कम्पनीले पहिलो आधा वर्षमा नै ३ अर्ब डलर आम्दानी गरेको थियो ।
पछिल्ला घटना सार्वजनिक भएसँगै पब्जीलाई प्रतिवन्ध लगाउन माग समेत भएको छ। एजेन्सी